We Fight We Win. -- " More than Media ": ကျချင်ပြည်နယ်စစ်ဆင်ရေးမှာ မြန်မာ စစ်သားများ အကျဆုံးများနေပါတယ်။
ကျချင်ပြည်နယ်စစ်ဆင်ရေးမှာ မြန်မာ စစ်သားများ အကျဆုံးများနေပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၄ရက် နေ့လဂျာယန်း တိုက်ပွဲမှာမရှု့ မလှသေရရှာတဲ့ စစ်သားလေးများ။
စစ်ဗိုလ်များက တောင်ကုန်းကိုရခြင်ဇောနဲ့ ရဲဘော်လေးများကို အသံခံတိုက်ခိုင်း နေကြောင်းသိရပါတယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းနေကြတယ်။
အိမ်ပြန်ပြေးခြင်နေကြပြီး မင်းအောင်လှိုင် က နပိုလီယံနဲ တူတာဆိုလို အရပ်ပုတာပဲတူတယ်
နပိုလီယံလို့ ရှေ့ တန်းမှာတိုက်ဘူးတာမဟုတ်ဘူး ကွ လုို့ သူတို့ ဦးစီးချုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကို
ဝေဖန် ကြတယ်လို့ ကြားဖြတ်စက်သတင်းများအရသိရပါတယ်။
I wonder why you are very happy to post those disgusting photos.
min aung hlaing kway ma thar..